Abacre Nidaamka Maamulka Hotel - Main Page
Gaaraan buuxda gacanta la this software maamulka hotel jiilka xiga!
Abacre Nidaamka Maamulka Hotel yahay jiil cusub oo software hotel / maamulka albeergo ee Windows. Waxaa xal buuxda, laga bilaabo la dhacsaneyn iyo hubi in / hubi, iyo soo afjaridda iyadoo wararka biilasha iyo canshuurta. Interface user ayaa waxaa si taxadar leh filaayo in aqbasho xawaaraha sare iyo ka hortagga qaladaad caadi ah. Waxaa loogu talagalay isticmaalaya on kombiyuutarada badan, oo ka kooban heer lagu kalsoonaan karo oo ammaan oggolaansho.
Barnaamijka waxaa samaysan karta wixii lacagaha, canshuuraha, iyo gratuities. Lacagta ay aqbali karto lacag caddaan ah, kaararka amaahda, ama jeeg.
Wixii maamulayaasha, waxaa jira set qani ku ah warar sheegaya in ay muujinaysaa sawir buuxa ka ah hawlaha hotel iyo wareegyada nolosha: iibka by qolka, iibka nooca qolka, amarrada iibka maqaayadaha ama tafaariiqda, hababka lacag bixinta, iyo xisaabinta canshuurta automatic.
By standardizing habka maareynta hotel dhan, software ka xagjirnimo ah wanaajinaya tayada ee maaraynta martida iyo xisaabaadka.
Way fududahay in la rakibo iyo fududahay in la isticmaalo. Aad liisan la awoodi u ogolaataa software taasi oo lagu isticmaalo deegaanka wax ka hotels qoyska leedahay yar iyo hotel in silsilado waaweyn.
Watch, umeerin, video gaaban oo ku saabsan Youtube:
Jeeg Simple ee u eegaan
Ballansashada, in hubi oo hubi
Buuxi wareegga: Boos, hubi in, si makhaayad iyo baadhid